Ku hagaaji waxqabadka iOS 10 ee ku saabsan iPhone ama iPad | Waxaan ka socdaa mac
Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay nooc ka mid ah ciriiriga ama cillad la xiriirta codsiyada qaarkood markaad rakibineysid macruufka 10. Waa wax caadi ah 5-ta daqiiqo ee ugu horreysa inta nidaamku la qabsanayo, markaa si caadi ah ayuu u shaqeyn doonaa dhib la'aan. Cusboonaysiintaani aad ayey uga wanaagsan tahay macruufka 9, laakiin haddii aad haysato qalab duug ah waxaa laga yaabaa inay mudan tahay inaad isku daydo inaad hagaajiso waxqabadka terminalka.
Baro dhowr ka hooseeya siyaabaha aad ku haysatid macruufka 10 si aad u hagaajiso waxqabadka oo aad u hubiso in wax waliba hagaagi doonaan xaalad kastoo jirta. Haddii ay u qalanto wax, oo aad ka qaadato, markaa aan tagno. Si loo hagaajiyo iPhone ama iPad.
macruufka 10: tayadoodii iyo hagaajinta waxqabadka
Kahor intaadan bilaabin wax ka beddelka dejinta iyo kontaroolada, tixgeli waxaad sameyneyso. Ma noqonayso in hadhow aad dhibaato ku qabtid hawl maalmeedkaaga. Oo haddaad aragto in talooyinkaas midkoodna uusan hagaajinayn waxqabadka, Waxaan kugula talinayaa inaad ka soo celiso aaladda xoqida oo aad mar labaad rakibto iOS 10. Hadda markaan ku dhammeeyo hordhaca, waxaan kuu dhaafayaa tilmaamaha ay tahay inaad raacdo si aad u hagaajiso qalabkaaga.
Jooji cusbooneysiinta taariikhda Caadiga ah. Adoo u huraya awood iyo waxqabad si loo yareeyo barnaamijyada, barnaamijyada ugu waaweyn iyo kuwa la isticmaalo si fiican uma shaqeeyaan. Waad ka joojin kartaa Dejinta> Guud> Cusbooneysiinta Taariikhda.
Iska yaree dhaqdhaqaaqa. Animations The, kaas oo sidoo kale hoos boor. Dejinta> Guud> Helitaanka> Iska yaree dhaqdhaqaaqa.
Iska yaree wax isdhaafsiga. sidoo kale Helitaanka iyo kordhinta kala duwanaanta. Halkaas waxaad ku yareyn kartaa daahfurnaanta iyo mugdiga midabada. Waxay si weyn kor ugu qaadi doontaa waxqabadka.
Dib u fur qalabka. Waxay umuuqataa doqon, laakiin nasashada ayaa wax badan caawisa.
Nadiifi oo masax tir faylasha hore ama culus. Hadduu diskku buuxsamo wuxuu u shaqeyn doonaa sidii nibiriga xeebta dusheeda loogu maydhay oo kale.
Iyo sidaan horeyba u idhi, dib u soo celi oo dib u cusbooneysii macruufka xoqida. Waxay noqon kartaa tan ugu waxtarka badan haddii aad leedahay terminaalkaaga muddo dheer.
Waana taas. Waxaan rajeynayaa inay kuu adeegi doonaan. Haddii iPhone uu aad u da 'weyn yahay waa iska caadi inuu qaldamo, haddii uu aad u socdana uma maleynayo inaad u baahan tahay inaad sameysid hagaajintan si aad u hagaajiso waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » macruufka » Ku hagaaji waxqabadka iOS 10 ee ku saabsan iPhone ama iPad
vGurusoft Video Player bilaash wakhti go'an